ဘစ်ကွိုင် - ဝီကီပီးဒီးယား
BTC,  CNNMoney, and xe.com.
၃ ဇန်နဝါရီ ၂၀၀၉; ၁၃ နှစ် အကြာက (၂၀၀၉-၀၁-03)
၂၀၁၉ နှစ်လယ်အထိ ဆယ်မိနစ်တိုင်း block တစ်ခုလျင် ဘစ်ကွိုင် ၁၂.၅ ခုနှုန်း
ဘစ်ကွိုင် (Bitcoin) ဆိုသည်မှာ Satoshi Nakamoto ဆိုသူမှ ၂ဝဝ၈ ခုနှစ်တွင် တီထွင်ပြီး ၂ဝဝ၉ ခုနှစ်တွင် open-source အဖြစ် ထုတ်ပေးခဲ့သော ဒယ်ဂျစ်တယ် ငွေကြေးပေးချေစနစ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စနစ်သည် peer-to-peer ဖြစ်သောကြောင့် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် တိုက်ရိုက် အလွှဲအပြောင်းလုပ်နိုင်သည်။ ငွေကြေးအလွှဲအပြောင်းများအား block chain ဟုခေါ်သည့် နက်ဝက်အစွန်းများဖြင့် အတည်ပြုသည်။ စနစ်သည် ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုမရှိဘဲ လုပ်ဆောင်သည်။ ယခင် စနစ်များရှိသော်လည်း ဘစ်ကွိုင်အား တခါတရံတွင် ခရိုက်တိုငွေကြေးဟု ခေါ်ကြသည်။ ဘစ်ကွိုင်အား ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုကင်းသော virtual ငွေကြေးဟု ပိုမိုမှန်ကန်စွာ ဖော်ပြကြသည်။ ယင်းသည် ဈေးကွက်တန်ဖိုးအားဖြင့် အမြင့်ဆုံးအမျိုးအစားလည်း ဖြစ်သည်။
ဘစ်ကွိုင်များအား ကွန်ပျူတာ၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းများအား အသုံးချကာ တန်ကြေးအနေဖြင့် ဖန်တီးယူကြသည်။ ယင်းဖြစ်ရပ်အား မိုင်းတူးခြင်း (mining) ဟုခေါ်ပြီး လွှဲပြောင်းခနှင့် ဘစ်ကွိုင် အသစ်များအား ရရှိကြသည်။ မိုင်းတူးခြင်းဖြင့် ရရှိသော်လည်း ဘစ်ကွိုင်များအား အခြားငွေကြေး၊ ပစ္စည်း၊ ဝန်ဆောင်မှုများဖြင့် ကုန်သွယ်ဖလှယ်နိုင်သည်။ အသုံးပြုသူများသည် အလွှဲအပြောင်း လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။
ဘစ်ကွိုင်အား ပေးချေမှုစနစ်အဖြစ် အသုံးပြုလာသည်မှာ တိုးပွားလာခဲ့သည်။ ကုန်သည်များသည်လည်း လက်ခံကုန်သွယ်ရန် လိုလားကြသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် ခရစ်ဒစ်ကဒ်ဖြင့် အသုံးပြုမှုထက် ဝန်ဆောင်ခမှာ ၂-၃ ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခရစ်ဒစ်ကဒ်နှင့် မတူသည်မှာ ဝန်ဆောင်ခသည် ပေးချေသူများမှပေးရပြီး ရောင်းဝယ်သူများမှ မပေးရပေ။ ဘစ်ကွိုင်အား ပြစ်မှုဆိုင်ရာတွင် အသုံးပြုခြင်းသည် မီဒီယာများ၊ အာဏာပိုင်များအား သတိထားမိစေသည်။ ဘစ်ကွိုင်အား အမေရိကန် အမတ် Rand Paul ကဲ့သို့သော နိုင်ငံရေးသမားအချို့က ထောက်ခံသည်။ သူသည် ဘစ်ကွိုင်ဖြင့် လှူဒါန်းခြင်းကို လက်ခံသူဖြစ်သည်။
၃ တန်ဖိုး အတက်အကျ
ဘစ်ကွိုင်စနစ်၏ ယူနစ်မှာ bitcoin ဖြစ်သည်။ ငွေကြေးအဖြစ် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ အသေး bitcoin ဟုသုံးပြီး ကွန်ပျူတာနှင့်ဆိုင်သော ဝေါဟာရအတွက် အက္ခရာအကြီး Bitcoin ကိုသုံးသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အရ သင်္ကေတမှာ BTC၊ XBT၊  ဖြစ်ကြသည်။ ပမာဏနည်းသော ဘစ်ကွိုင်အတွက် millibitcoin (mBTC) microbitcoin (µBTC) အစရှိသည်ဖြင့် အသုံးပြုသည်။ ဘစ်ကွိုင်ငွေကြေးတွင် ၁ satoshi သည် အနည်းဆုံးပမာဏဖြစ်ပြီး ၁ BTC ၏ ၀.၀၀၀၀၀၀၀၁ ဖြစ်သည်။ millibitcoin သည် ၀.၀၀၁ bitcoin နှင့်ညီမျှပြီး ၁ BTC ၏ တစ်ထောင်ပုံတစ်ပုံ ဖြစ်သည်။ satoshi ဆိုသည်မှာ စနစ်အားဖန်တီးသူ ဂျပန်လူမျိုးအား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မှည့်ခေါ်ခြင်းဖြစ်သည်။
Electrum ဘစ်ကွိုင် ပိုက်ဆံအိတ်
bitaddress.org တွင် ဘစ်ကွိုင်ပိုက်ဆံအိတ်စာရွက်အား ထုတ်ပေးသည်
Trezor ဟာဒ်ဝဲလ် ပိုက်ဆံအိတ်
ဘစ်ကွိုင်များအား စုထားရန် သို့မဟုတ် ထိန်းသိမ်းရန်အတွက် ပိုက်ဆံအိတ် (wallet) ကို အသုံးပြုရသည်။ ဆော့ဝဲလ်အား အခြေခံသည့် ပိုက်ဆံအိတ် အွန်လိုင်းဝဘ်ဆိုဒ်အားအခြေခံသည့် ပိုက်ဆံအိတ် ဟာဒ်ဝဲလ်ပိုက်ဆံအိတ် အစရှိသည်ဖြင့် ကွဲပြားသည်။ ဆော့ဝဲလ် ပိုက်ဆံအိတ်တွင်လည်း full client နှင့် lightweight client ဟူ၍ ထပ်မံကွဲပြားသည်။ full client များသည် block chain မှအချက်အလက်များကို အပြည့်အဝ လိုက်ရှာသည်။ ၂၀၁၆ တွင် ၆၀ ဂစ်ဂါဘစ် ပမာဏကျော်ကာ အချို့သော အသုံးပြုသူများအတွက် အဆင်ပြေမည်မဟုတ်ပေ။ အခြားသော ပိုက်ဆံအိတ်အမျိုးအစားမှာ အွန်လိုင်းအခြေစိုက်ဖြစ်ကြသည်။ ဥပမာဆိုရသော် blockchain.info Coinbase စသည်တို့ဖြစ်သည်။ ယင်းအမျိုးအစားတွင် အသုံးပြုသူအနေဖြင့် အခြေစိုက်ဆာဗာပေါ်တွင် လုံးဝဥသုံ ယုံကြည်ရပေမည်။ အွန်လိုင်းပိတ်ဆံအိတ်များသည် အသုံးပြုသူများ၏ ဟာဒ်ဝဲလ်များထက် ပိုက်ဆံအိတ်နှင့်ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကို ဝန်ဆောင်မှုပေးသူ၏ဆာဗာ၌သာ သိမ်းထားသည်။ အသုံးပြုသူများအတွက်မူ လွယ်ကူနိုင်ကောင်းသည်။
၂ဝ၁၄ ခုနှစ် Mark T. Williams ၏အဆိုအရ ဘစ်ကွိုင်သည် ရွှေထက် ခုနှစ်ဆ၊ အမေရိကန်ဒေါ်လာထက် ၁၈ ဆ တန်ဖိုးရှိသည်။ တန်ဖိုးမြင့်နေခြင်းကို ထိန်းညှိပေးမည့်စနစ်မရှိဟု ဂျပန်လူမျိုး ကျောင်းသားများက ရှင်းပြသည်။ Forbes မဂ္ဂဇင်း၏ ဂျာနယ်လစ်တစ်ယောက်မှပြောကြားသည်မှာ ဘစ်ကွိုင်သည် ရေရှည်တွင် တန်ဖိုးရှိရန် မသေချာဟုဆိုသည်။ ကနဦးငွေကြေးတန်ဖိုး မြင့်တက်ခြင်းမှာ ယုတ္တိရှိသည်။ "ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ လူတွေဟာ အဲဒီဘစ်ကွိုင် ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲဆိုတာ အတွေ့အကြုံရချင်လို့ပါပဲ"။ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ်တွင် တန်ဖိုးသည် ဒေါ်လာ ဝ.၃ မှ ၃၂ အထိမြင့်တက်ခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၂ ခုနှစ်တွင် ဘစ်ကွိုင်တန်ဖိုးသည် စတင်ကာ မြင့်တက်လာခဲ့သည်။ ၂ဝ၁၃ ခုနှစ် ဩဂုတ်လတွင် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၆ဝဝ အောက်တွင် တည်ရှိသည်။ ၂ဝ၁၃ နိုဝင်ဘာလတွင် ဘစ်ကွိုင်တန်ဖိုး အမြင့်ဆုံး ၁၂၄၂ အထိ မြင့်တက်ခဲ့သည်။ ဇန်နဝါရီလ ၂ဝ၁၅ ခုနှစ်တွင် ဘစ်ကွိုင်တန်ဖိုးသည် ၂ဝ၁၃ ခုနှစ်ကတည်းက အနည်းဆုံးတန်ဖိုး အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၄ သို့ ကျဆင်းသွားခဲ့သည်။ ၂၀၁၇ မတ်လ ၃ ရက်နေ့အရ ဘစ်ကွိုင်တန်ဖိုးသည် ရွှေဈေးထက် ကျော်လွန်ကာ ယင်း၏တန်ဖိုးသည် အမြင့်ဆုံးသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း ၂၀၁၇ နှစ်စမှစတင်ကာ တစ်ဖြည်းဖြည်းပြန်လည်မြှင့်တက်လာခဲ့ပြီး ၂၀၁၇ ဒီဇင်ဘာလတွင် ဒေါ်လာ ၂၀၀၀၀ ထိ အဆ ၂၀ ဆ ထိုးတက်သွားခဲ့သည်။ ဘစ်ကွိုင်သည် ဈေအတက်အကျအလွန်ကြမ်းပြီး ၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလတွင်မူ ၃၂၀၀ ဒေါ်လာသာ ကျန်ရှိတော့သည်။ လက်ရှိအချိန်တွင်မူ ဒေါ်လာ ၁၁,၀၀၀ ခန့်ပေါက်ဈေးရှိနေပြီး ရွှေထက် ၈ဆ ခန့် တန်ဖိုးရှိနေသည်။
↑ Nermin Hajdarbegovic (7 October 2014)။ Bitcoin Foundation to Standardise Bitcoin Symbol and Code Next Year။ CoinDesk။ 28 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Romain Dillet။ "Bitcoin Ticker Available On Bloomberg Terminal For Employees"၊ TechCrunch၊9August 2013။2November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Bitcoin Composite Quote (XBT)"၊ CNN Money၊ CNN။2November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ XBT - Bitcoin။ xe.com။2November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Garzik၊ Jeff (2 May 2014)။ BitPay, Bitcoin, and where to put that decimal point။ 17 November 2015 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၆.၀ ၆.၁ Jason Mick (12 June 2011)။ Cracking the Bitcoin: Digging Intoa$131M USD Virtual Currency။ Daily Tech။ 20 January 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 30 September 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ron Dorit (2012)။ Quantitative Analysis of the Full Bitcoin Transaction Graph။ Cryptology ePrint Archive။ 18 October 2012 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Nakamoto၊ Satoshi (October 2008)။ Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System။ bitcoin.org။ 28 April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Davis၊ Joshua (10 October 2011)။ The Crypto-Currency: Bitcoin and its mysterious inventor။ The New Yorker။ 31 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Drug market moving quickly online, global user survey finds။ South China Morning Post။ South China Morning Post Publishers (14 April 2014)။7January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sparkes, Matthew။ "The coming digital anarchy"၊ The Telegraph၊ London: Telegraph Media Group Limited၊9June 2014။7January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lachance Shandrow၊ Kim (30 May 2014)။ This Company Is Now the Largest in the World to Accept Bitcoin။ entrepreneur.com။ Entrepreneur Media, Inc။7January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ Jerry Brito and Andrea Castillo (2013)။ Bitcoin: A Primer for Policymakers။ Mercatus Center။ George Mason University။ 22 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Sagona-Stophel၊ Katherine။ Bitcoin 101 white paper။ Thomson Reuters။5March 2016 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 20 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Espinoza၊ Javier။ "Is It Time to Invest in Bitcoin? Cryptocurrencies Are Highly Volatile, but Some Say They Are Worth It"၊ Journal Reports၊ The Wall Street Journal၊ 22 September 2014။3November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "What is Bitcoin?"၊ CNN Money။ 16 November 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Natasha Lomas (16 September 2013)။ BitPay Passes 10,000 Bitcoin-Accepting Merchants On Its Payment Processing Network။ Techcrunch။ Techcrunch.com။ 21 October 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Joshua A. Kroll, Ian C. Davey, Edward W. Felten (11–12 June 2013)။ The Economics of Bitcoin Mining, or Bitcoin in the Presence of Adversaries။ The Twelfth Workshop on the Economics of Information Security (WEIS 2013)။ 20 August 2013 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။ 8 May 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “A transaction fee is likeatip or gratuity left for the miner.”
↑ Wingfield, Nick။ "Bitcoin Pursues the Mainstream"၊ The New York Times၊ 30 October 2013။4November 2013 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Higgins၊ Stan။ "Rand Paul Accepts Bitcoin for Presidential Campaign" (in en)၊ CoinDesk၊7April 2015။ 23 October 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Regulation of Bitcoin in Selected Jurisdictions။ The Law Library of Congress, Global Legal Research Center (January 2014)။ 26 August 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Katie Pisa and Natasha Maguder။ "Bitcoin your way toadouble espresso"၊ cnn.com၊ CNN၊9July 2014။ 23 April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Adam Serwer and Dana Liebelson (10 April 2013)။ Bitcoin, Explained။ motherjones.com။ Mother Jones။ 26 April 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Information about cryptocurrency networks။2January 2016 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Jon Matonis။ "Be Your Own Bank: Bitcoin Wallet for Apple"၊ Forbes၊ 26 April 2012။ 17 November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "3 reasons Wall Street can't stay away from bitcoin"၊ NBCUniversal၊4Jun 2014။2April 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Williams, Mark T. (21 October 2014)။ Virtual Currencies – Bitcoin Risk။ World Bank Conference Washington DC။ Boston University။ 11 November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Can We Stabilize the Price of Cryptocurrency?: Understanding the Design of Bitcoin and its Potential Competitiveness with the Central Bank Money (24 July 2014)။ 8 January 2015 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။ “"The first instability stems from an inflexible supply curve of Bitcoin, which amplifies Bitcoin price volatility; the miners’ revenue/reward fully absorbs any price changes. There is no price stabilization mechanism."”
↑ Lee၊ Timothy B.။ "Bitcoin Doesn't HaveaDeflation Problem"၊ Forbes၊4November 2013။ 27 January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee၊ Timothy B.။ "Bitcoin's Volatility Is A Disadvantage, But Not A Fatal One"၊ Forbes၊ 12 April 2013။ 15 November 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Lee, Timothy။ "When will the people who called Bitcoinabubble admit they were wrong"၊ The Washington Post၊5November 2013။ 10 January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Liu၊ Alec (19 March 2013)။ When Governments Take Your Money, Bitcoin Looks Really Good။ Motherboard။7February 2014 တွင် မူရင်းအား မော်ကွန်းတင်ပြီး။7January 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Bitcoin prices remain below $600 amid bearish chart signals။ nasdaq.com (August 2014)။ 31 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ Ben Rooney။ "Bitcoin worth almost as much as gold"၊ CNN၊ 29 November 2013။ 31 October 2014 တွင် ပြန်စစ်ပြီး။
↑ "Bitcoin value tops gold for first time"၊3March 2017။
↑ Molloy၊ Mark။ "Bitcoin value surpasses gold for the first time"၊3March 2017။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဘစ်ကွိုင်&oldid=719162" မှ ရယူရန်